သူများနဲ့ မတူ အချစ်စမ်းကြမယ့် သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ နှစ်ပါးသွား Update က ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲ? နှစ်ပါးသွားUpdate ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ Romantic Comedy အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး နေတိုးနဲ့ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်တို့ရဲ့ လူငယ်ဆန်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေက ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တွေ ထပ်တိုး ရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး ပျော်ရွှင်ရယ်မောစေမယ့် ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်။
သူများနဲ့ မတူ အချစ်စမ်းကြမယ့် သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ နှစ်ပါးသွား Update က ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲ?
နှစ်ပါးသွားUpdate ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ Romantic Comedy အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး နေတိုးနဲ့ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်တို့ရဲ့ လူငယ်ဆန်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေက ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တွေ ထပ်တိုး ရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး ပျော်ရွှင်ရယ်မောစေမယ့် ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်။
🎥🎥 ထုတ်လုပ်ရေး.... အောင်တိုင်းကျော် 🎥🎥
🎥🎥 ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်း... ကိုကျော် 🎥🎥
🎥🎥 ဒါရိုက်တာ.... ကျော်ဇောလင်း ၏ (အတွေးပုံရိပ်) 🎥🎥
နေတိုး ၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
Anna, Elsa, Kristoff, Olaf and Sven leave Arendalle and travel to an ancient, autumn-bound forest to uncover the origins of Elsa's powers and save their kingdom.
အကျင့်မတူတဲ့ အခွီသူငယ်ချင်းတစ်သိုက်အပျော်ခရီးသွားရင်း ဘယ်လို ခြောက်ခြားစရာတွေ ကြုံရမလဲဆိုတာကို....
မသိစိတ်တွေမှာအရမ်းချစ်ကြပေမဲ့ အပြင်မှာအမြဲတမ်းအရွဲတိုက်နေတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေရှိကြလား... အချစ်ဟာသဇာတ်ကားအဖြစ် Ro စရာ၊ ပျော်စရာလေးတွေနဲ့ ရည်းစားတစ်ခုလပ်များ